पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गर्दै, कहिले सम्म हुन्छ वर्षा ? – Health Post Nepal
पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गर्दै, कहिले सम्म हुन्छ वर्षा ?
२०७८ जेठ २७ गते १६:२२
मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायु, पूर्वीय वायु र स्थानीय वायुको मिश्रित प्रभाव कायम छ ।
त्यसले वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश १ का केही भेगमा वर्षा जारी छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पनि वर्षा भएको छ ।
आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
शुक्रबार पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र धेरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको हुनेछ ।